Simiso & Ukufuma woluvo detector
Ubushushu & Ukufuma detector
I-HENGKO Technology Co, Ltd ngumvelisi wobuchwephesha obuphezulu obujolise kwi-R & D, uyilo kunye nokwenza izixhobo zentsimbi yentsimbi yeplastikhi yentsimbi, ikharbonation diffuser, iqondo lobushushu lokukhanya kwemitha kunye negesi yokucoca igesi. Ukusombulula iingxaki eziphezulu zobugcisa kunye nobunzima bokucoceka, umswakama kunye nemboni yokufumana irhasi.
Yasekwa ngonyaka ka-2001, HENGKO lulandelayo ngokungqongqo ISO9001: 2015 inkqubo yolawulo lomgangatho ukwenzela ukuqinisekisa ukuba iimveliso kunye nomgangatho premium nocoselelo obalaseleyo, imbonakalo abakreqayo, iyantlukwano functional, iipatheni ezahlukeneyo kunye nexabiso nezifikelelekayo. Nge R abanezakhono & iqela D kunye woveliso oluqhubele phambili kunye nezixhobo zokuvavanya, ezinako ukudala izisombululo ethile yakhelwe i izicelo kwemisebenzi, izakhiwo, izixhobo, imilinganiselo kubasebenzisi thina.
Thina ingakumbi kakuhle kwi sintered micro element filter steel stainless, iimveliso zesinyithi aneentunja high nzima, super isakhiwo ngomzimba ityhubhu lokucoca microporous, 800 mm elikhulu metal aneentunja filter ipleyiti kunye neemveliso idiskhi. Okwangoku, sibonelela zonke iintlobo zeenkonzo elicwangcisiweyo iqondo lobushushu nokufuma sensor uphenyo, ukufuma tshin, kunye evuza igesi tshin izindlu amazwe.
Iminyaka yenkonzo nangolwazelelelo, ezintsha rhoqo kunye nokuzinikela, HENGKO wenze impumelelo enkulu ukuhlola kokusingqongileyo, izixhobo kunye apparatus, izixhobo zamachiza, ukhuselo lokusingqongileyo, petroleum, igesi yendalo, ushishino iikhemikhali kunye namasimi isicelo nezinye.
Siye lithunyelwa anoqoqosho oluphambili mveliso apha ekuhambeni kwexesha afana eYurophu, USA, Japan, eRashiya, Canada, Australia, mpuma Asia leyo zineemfuno engqongqo iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Sijonge phambili ekusekweni oluzinzileyo qhinga olunzulu unxulumano lwentsebenziswano kunye nabahlobo kwiinkalo zonke zobomi kunye nokudala ikamva elingcono njengabemi.
Ukukhokela isikhundla micro-nano housings SS aneentunja kunye noxinzelelo oluphezulu ukumelana amacebo SS aneentunja zemalike.
1. ubungakanani efanayo Pore oluchanileyo kunye pores nama ngokulungelelana ezisasaziweyo.
2. High amandla, oluzinzileyo noshowo, umthwalo omkhulu shoka xi ukumelana, ezilungele kakuhle ingcinezelo zahlula eliphezulu ukhazimle irhafu,
indawo ephambili koxinzelelo oluphezulu flow eliphakathi (40 MPA) sintered izinto metal amazwe.
3. Le breathability kakhulu, isantya sokuqukuqela ekhawulezayo, ukuhluza okulungileyo zingabi nalo ukusebenza, ubuchule ukuhluza ophezulu, ubomi inkonzo ende.
4. Ngaphezulu kwe-100 amawaka lweendidi standard kunye neemodeli ezikhoyo, nezinto ngokutsho izakhiwo ezintsonkothileyo eziphindaphindiweyo bafuna ngokunjalo.
output mutiple: 0-20mA, RS485 ......
lobushushu + -0.1 ° C, ukufuma + -1.5% RH
wireless kwaye igxunyekwe
ixhokonxa ezahlukeneyo ongazikhetha
housings isivamvo ezahlukeneyo ongazikhetha
iindidi ezahlukeneyo sensor:
ifanele neegesi ezahlukeneyo
izakhiwo ezininzi kunye nomlinganiselo ukukhetha
uluhlu olubanzi Pore Isanti
ubungqina anti-dubulo & lidangatye
Customer kuqala, ukunceda abathengi ukuba bafumane imveliso yokugqibela ogqibeleleyo kunye nokwandisa ngakumbi yeenzuzo emarikeni kunye neenkonzo zethu nolwazelelelo, iimveliso ezigqwesileyo kunye noyilo ngaphezulu abasomelezayo!
uyilo lobunikazi kunye nokunye.
Sikuphathele ezininzi iingcamango ezilungileyo share
Bhalisela kwincwadana yethu HENGKO kwaye ufumane amacebiso ngemihla
ukwazi inkcazelo engakumbi kushishino lobushushu & sensor ukufuma,
kakutsha igesi, kunye nentsimbi amazwe.
Nceda ufake igama lakho.
Nceda ufake idilesi ekhona.
Into ayihamba kakuhle. Nceda khangela amangenelo zakho uze uzame kwakhona.
© Copyright - 2001-3030: HENGKO.com All Rights Reserved. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
misindo Metal , Stainless lokucoca ulwelo, Ukufuma woluvo , Isihluzi Sintered , Gas detector Housing , Sparger